Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Nilaza tamin'ny Air France ny birao fizahantany afrikana fa tianay ianao!
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Cote d'Ivoire Vaovao Vaovao • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana Gambia • Kenya Breaking News • Vaovao farany Mozambika • Seychelles Madagascar Malgache • Vaovao Mafana Tanzania
Ny Air France dia nanome mihoatra ny mariky ny fanantenana fotsiny amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany afrikanina.
Faly ny birao fizahantany afrikanina hianatra momba ny fanitarana kasaina hataon'ny kaompaniam-pirenena frantsay ho an'ity ririnina ity.
Ny Air France dia mijery am-panantenantena amin'ny fanitarana ny fanatrehany an'i Afrika rehefa nanolotra ny fandaharam-potoanan'ny ririnina 2021/2022 ny kaompaniam-pirenena frantsay.
AIr France dia hanitatra ny tamba-jotra manerantany ho any Zanzibar, Seychelles Maputo ary Banjul
Nankasitraka ity hetsika ity ny filohan'ny birao afrikana fizahan-tany
Air France, namboarina ho AIRFRANCE, dia ilay mitondra saina any France manana ny foibeny ao Tremblay-en-France. Izy io dia sampana iray an'ny Air France – KLM Group ary mpikambana mpanorina ny firaisan'ny fiaramanidina manerantany SkyTeam.
Miaraka amin'ny dia lavitra COVID-19 sy fizahan-tany mankany Afrika dia mbola olana hatrany. Ny fanehoana ny fahatokisan-tena asehon'ny Air France ho an'i Afrika dia hiteraka fahatokisan-tena amin'ny indostria ary antenaina ho an'ireo mpitsidika mety hitranga.
Paris-Banjul amin'ny Air France
Hanomboka ny serivisy ho an'i Banjul, renivohitr'i Gambia any Afrika Andrefana ny Air France.
Paris- Banjul dia hiasa amin'ny Airbus A330 misy seza 224. Ahitana toerana 36 ao amin'ny kilasy fandraharahana, Toekarena premium 21 ary seza 167 Economy.
Ny Gambia dia firenena kely atsy Afrika Andrefana, fehezin'i Senegal, miaraka amin'ny morontsiraka Atlantika tery. Fantatra amin'ny tontolo iainana isan-karazany manodidina ny reniranon'i Gambia afovoany. Bibidia be dia be ao amin'ny Kiang West National Park sy ny Bao Bolong Wetland Reserve dia misy gidro, leoparda, hipopotama, hyena ary vorona tsy fahita firy. Ny renivohitra, Banjul, ary Serrekunda akaiky dia manolotra fidirana amin'ny torapasika. Ny serivisy dia heverina fa hanomboka amin'ny 31 Oktobra.
Paris- Maputo amin'ny Air France
Manomboka amin'ny 31 Oktobra koa ny serivisy vaovaon'ny Air France mankany Maputo, Mozambika.
Ity zotra vaovao mankany Maputo ity dia hiasa amin'ny Boeing 777-300ER lehibe manolotra Kilasy voalohany, Orinasa, Toekarena Premium ary Toekarena.
Paris- Abidjan ao amin'ny Air France
AF704 dia hiasa eo anelanelan'ny Paris Charles de Gaulle amin'ny alàlan'ny Banjul mankany Abidjan any Ivory Coast.
I Ivory Coast dia nampiantrano ny filohan'ny filan-kevitry ny fizahantany afrikanina Cuthbert Ncube ary eo an-dàlam-pandrosoana hanitatra ny fizahantany amin'ity firenena afrikanina andrefana ity.
I Côte d'Ivoire dia firenena iray any Afrika Andrefana miaraka amin'ireo toeram-pialantsasatra amoron-dranomasina, ala mando ary lova kolonialy frantsay. Abidjan, any amin'ny morontsirak'i Atlantika, no ivon-toerana lehibe an-drenivohitra. Ny mari-pamantarana maoderina dia misy ny ziggurat toy ny, La Pyramide mivaingana ary ny Katedraly St. Paul, rafitra mitaingina miraikitra amin'ny lakroa. Any avaratry ny distrikan'orinasa afovoan-tany, ny valan-javaboary Banco dia ala arovana miaraka amina lalan-tongotra.
Paris- Zanzibar amin'ny Air France
Efa amin'ny 18 Oktobra dia hampifandray an'i Paris amin'ny nosy fialantsasatra ao Tanzania, Zanzibar ny Air France.
Ity serivisy ity dia hiasa amin'ny fijanonana any Nairobi, Kenya amin'ny fiara Boeing 787-9
Ny fizahan-tany any Zanzibar dia misy ny indostrian'ny fizahantany sy ny vokany any amin'ny nosy Unguja sy Pemba any Zanzibar, faritra semi-autonomous ao amin'ny Repoblika Mitambatra Tanzania
Paris - Seychelles amin'ny Air France
Fizahan-tany Seychelles efa nanambara ary faly miarahaba ny serivisy A330-2200 avy any Paris mankany amin'ity paradisa fizahan-tany amin'ny Ranomasimbe Indiana ity ary miteny anglisy. Natomboka tamin'ny taona 2019 ny serivisy ary tapaka noho ny COVID-19.
Hanomboka amin'ny 23 Oktobra ity serivisy ity.
Birao fizahantany afrikanina Nilaza ny filoha Cuthbert Ncube eTurboNews, faly izy tamin'ny fanitarana ny tamba-jotra Air France ho any Afrika. Ncube mahatsapa fa fivoarana tena tsara io nandrasan'ny Fizahan-tany Afrikanina.